नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : Sagoon ले ठगी गरिरहेको भन्दै मिडियाहरु र सामाजिक सँजालमा एक पछी अर्को गर्दै समाचार आइरहेका बेला आयो Sagoon को प्रेस बिज्ञप्ती !
Sagoon ले ठगी गरिरहेको भन्दै मिडियाहरु र सामाजिक सँजालमा एक पछी अर्को गर्दै समाचार आइरहेका बेला आयो Sagoon को प्रेस बिज्ञप्ती !
सबैभन्दा पहिला हाल बजारमा आइरहेको Sagoon बिरुद्धको समाचार र भिडियो सुनौं, हेरौँ !
धेरै बर्ष अघि देखी कहिले गूगलको त कहिले फेसबुकको प्रतिस्प्रधी भन्दै सोझा साझा नेपालीहरुबाट मिलेनियर बनाउने सपना बाँडदै Sagoon ले ठगी गरिरहेको भन्दै मिडियाहरु र सामाजिक सन्जालमा एक पछी अर्को गर्दै समाचार आइरहेका छन । कतिपयले अमेरिकामा PFA इन्स्योरेन्सका नाममा हजारौं हजार नेपाली परिवार ठगे पछी त्यही टोली Sagoon मा मिसिएर ठगी गरेको दाबी गर्दै आएका छन । अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनी लाभदायक भए किन खाडी मुलुकमा रहेका, नेपालमा रहेका सोझा साझा नेपालीहरुलाई मात्र टार्गेट गरेर पैसा उठाउने काम गरिएको छ भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला Sagoon का Co-founder कबिन्द्र सिटौलाले दुई पेज
लामो प्रेस बिज्ञप्ती पठाउनुभएको छ । सिटौलाद्वारा जारी प्रेस बिज्ञप्ती जस्ताको तस्तै :
सगुनका संस्थापक गोबिन्द गिरी
नेपालीहरुको सक्रियतामा अमेरिकाको डेलावयर राज्यमा कानूनीरुपमा दर्ता भएर विश्वभर सामाजिक सञ्जालको रुपमा फैलिएको सगुनका सम्वन्धमा नेपालका केही सञ्चारमाध्यम तथा समाजिक सञ्जालहरुमा प्रकाशित भ्रामक समाचारप्रति हाम्रो ध्यानार्कण भएको छ ।
सगुनलाईअमेरिकाको धितोपत्र तथा विनियम आयोग (US Securities and Exchange commission, SEC) बाट शेयरसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त छ र सोही आयोगको नियमभित्र रही सोही निकायले नियमन गर्दै आइरहेकोछ ।
इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भई भारतीय रिजर्व बैँक (RBI) द्वारा असीमित रेमिट्यान्स कारोवार गर्ने सगुनले भारतमा सन् २०१५ मा अनुमति प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका सबै दर्ता तथा कानुनी प्रकृया पूरा गरी सगुन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड दर्ता सन् २०१७ गरिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैँकबाट तीन करोड रुपैयाँमा आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिने गरी कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त कम्पनी भएको जानकारी गराउँदछौँ ।
सुरुमा सन् २०१५ सम्म अमेरिकी कम्पनीहरुमा समेत सर्वसाधारणलाई सेयर किनबेच गर्न अनुमति थिएन । नयाँ परिवर्तित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब एसइसीले योग्य ठह¥याएका कुनै पनि कम्पनीहरुले आफ्नो सेयर (इक्विटी) सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी बार्षिक पाँच करोड अमेरिकी डलरसम्मको पूँजी जम्मा गर्न सक्ने छन् ।
सगुन अमेरिकी कानुनअनुरुप अन्य ख्यातिप्राप्त कम्पनी जस्तै अमेरिकाको धितोपत्रसम्बन्धी आयोग (US SEC) बाट योग्य कम्पनीको रुपमा छनौट भएको कम्पनी हो । सगुनले अमेरिकी सरकारको मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गर्ने आधिकारिक रुपमा अनुमति प्राप्त गरेको हो ।
नेपाली र नेपाली मुलका विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपालीको मुख्य लगानी रहेको सगुन दक्षिण एसियाली मुलुकमा नागरिकले स्थापना गरेको पहिलो अमेरिकी कम्पनी हो । सगुन विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरु समक्ष पु¥याउन उत्साहित छ । पूँजी निर्माणमा सहभागी हुन पाउने यो विशेष अवसर विश्वभरि रहेका ती सबै नेपालीहरुमा पु¥याउन चाहन्छौं । जुन इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त हुन सकेको थिएन ।
यस अवसरका बारेमा भारतका दार्जिलिङ, असम, मणिपुर, भुटान, बर्मालगायत विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीभाषीलाई समेत हाम्रो सञ्जालमा जोड्न चाहन्छौं । सो सञ्जाल जोड्नका लागि नेपाली सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरुलाई आइफोन, एन्ड्रोइड फोन तथा डेस्कटपहरुमा सगुन प्रयोग गर्ने सुविधासहित सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ । हालसम्म विश्वका १ सय २० भन्दा बढी राष्ट्रहरुबाट ७० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु सगुनको प्लेटफार्ममा जोडिएका छन् । जसमध्ये धेरै प्रयोगकर्ताहरु नेपाल, भारत र अमेरिकामा छन् । हालसम्म विश्वभरबाट ४ हजार भन्दा बढी सर्वसाधारण व्यक्तिहरुले ६० लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम सगुनमा लगानी गरिसकेका छन् । सुगनका अधिकांश लगानीकर्ताहरु अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र भारतका रहेका छन् ।
नेपालमा कम्पनी स्थापना गरेर क्रियाकलाप गर्नुको उद्देश्य नेपालको रकमलाई विदेशमा पु¥याउनु होइन । बरु विदेशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउनु, नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्नु, व्यवसायका नयाँ र इनोभेटिभ अवसरहरु पत्ता लगाउनु र नेपाललाई आर्थिक सम्बृद्धिका क्षेत्रमा टेवा पु¥याउनु नै हो । साथै अमेरिका, युरोप, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायतका पश्चिमी मुलुकहरुमा बर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका नेपाली डायस्पोराले हाँसिल गरेको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको उन्नतिमा साझेदारी गराउनु पनि सगुनको लक्ष हो ।
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालमा १ करोड ५० लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग गर्दछन् । नेपालका यति धेरै प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरुमा राखिएको विज्ञापनबाट अन्र्तराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालहरुले बार्षिक करिव २२ अरब रुपैयाँ नेपालबाट कमाउँछन् । त्यो रकम नेपालमा नै रहोस् भन्ने चाहना र कोसिस सगुनको रहेको छ, रहिरहने छ ।
२. ‘स्टार्ट–अप’ भन्ने शब्दसँग कोही अलमलिनु जरुरी छैन । ‘स्टार्ट–अप’ शब्दको धरातलीय अर्थ भर्खर सुरु गरिएको भन्ने भएता पनि यसको वास्तविक अर्थ (यस क्षेत्रमा) हालसालै स्थापना गरिएको भन्ने अर्थमा मात्र सीमित हुदैन । लामो समयदेखि विश्वबजारमा विश्वविख्यात कम्पनीहरुले समेत ‘स्टार्ट–अप’ लेख्ने प्रचलन रहेकोछ । ‘स्टार्ट–अप कम्पनी’ ले नयाँ आइडिया बजार ल्याउने तथा नयाँ प्रविधिको खोजी गर्दछन् ।
बजारमा हेर्ने हो भने पनि ठूलै मात्रामा सर्वसाधारणले प्रयोग गरिरहेका प्रोडक्टहरुका उत्पादक कम्पनीहरुलाई समेत ‘स्टार्ट–अप कम्पनी’ नै भनिएको पाइन्छ ।
४. सगुनले धितोपत्र तथा विनिय आयोगमा पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदनलाई गलत ढंगले अपव्याख्या गर्दै आमसर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई समेतको विश्वासमा भ्रमित गर्ने गरी आएका समाचारप्रति दुःख व्यक्त गर्दछौं । सामान्यतया, लेखापरिक्षणको भाषामा, कम्पनीले आफ्नो इक्विटी बिक्री गरी संकलन गरेको कोषलाई घाटाको रुपमा लेखांकन गरिन्छ, तर वास्तवमा यो घाटा होइन् । यसरी संकलन गरिएको पूँजीलाई कम्पनीले आफ्ना एप्लिकेशनहरु विकास गर्न र प्रयोगकर्ताहरु बढाउन उपयोग गर्छ । जसले वास्तविक अर्थमा कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ति बढाउँछ । यसैको आधारमा कम्पनीको मूल्याकंन (भ्यालुएशन) मा बृद्धि हुन्छ । सगुन रेगुलेसन ए प्लस (Reg A+ Mini-IPO) अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरुको आह्वान पत्र र वित्तीय प्रतिवेदनहरु हेर्ने हो भने सगुनमा प्रयोग गरिएको भाषा नै प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ । सगुनको आर्थिक प्रतिवेदनका कुराहरुको अध्ययन गर्न सम्वन्धित पक्षहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।
अमेरिकामा दर्ता भएर नेपालको कानूनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै नेपालमा समेत कार्यालयको स्थापना गरी सञ्चालन भएको सगुन कम्पनीका सम्वन्धमा दुवै देशका नियम कानुन अनुरुप संचालित छ । र भर्खरै सुरु भएको ‘स्टार्ट अप’ कम्पनीको काम गर्ने तरिकाका बारेमा सीमित सूचनामा प्राप्त गरेको भरमा भ्रमपूर्ण जानकारी सम्प्रेषण नगर्न सम्वन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।
साथै, यदि सगुनका बारेमा केही प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन् अनुरोध गर्दछौं ।
सगुन, वासिन्टन डिसी, अमेरिका
३, जुन २०२०
अमेरिकामा रहेका समाजसेबी राम बस्याल र केही अन्य नेपालीहरुको प्रतिकृया / तर्क यस्तो छ